Ngokuvamile, ukuhalalisela othandekayo eziyinkimbinkimbi okungaphezu nje uzakwabo emsebenzini. Uqala ukucabanga zonke izindlela ezingakhona nezindlela, kodwa kuvela eqinisweni konke lokhu akunjalo. Futhi uma kuziwa ugogo wakhe othandekayo, wonke fantasy sivame ukuphela. Nakuba empeleni ukuhalalisela ngosuku lokuzalwa umzukulu ugogo nje ukukwenza.
Indlela engcono ukuhlehlisa konke futhi achitha usuku lonke naye.
Beka zonke lezi izinto eziphuthumayo futhi ebalulekile, umakhalekhukhwini Khipha uma kungenzeka. Kumelwe ulalelisise ukuthi zonke izindaba kothandekayo, ucabangisise imikhonzo umzukulu kukagogo. Lokhu akusho ukuthi kufanele achitha usuku lonke ekhaya lakhe. Sithathe amathikithi movie bese uhlela samaholide wokubuka ukukhanya comedy. Kunenye nobunzima. Lapho amathikithi ngokukhetha kumele kube kahle ubuze yaseshashalazini isisebenzi mayelana nokuqukethwe ifilimu, hhayi abanjwe. Uma ehhovisi ibhokisi akuyona movie kwesokudla, vakashela yemidlalo noma Museum.
Khumbula lokho ngentshiseko ukutshela ugogo othandekayo wakho muva nje. Mhlawumbe yena wayefuna ukuthatha uhambo ku epaki ehlobo ukuba bawushiye lowo muzi, ukuya asanda kuvulwa shopping centre. Ukugcwalisa izifiso zakhe ekuphileni.
Ngezinye izikhathi impilo omthandayo sika ayikuvumeli sishaywe umoya isikhathi eside. Kulokhu, thatha disc nge-movie eyithandayo ukuhlela iholide-umbono amakhaya.
Uma esidlweni gala ukuxoxa ifilimu okuskeniwe noma wabelane okutholile ukuvakasha Museum and yemidlalo. Kuyinto imfihlo ukuthi asebekhulile akudingeki ukuxhumana ngokwanele. Nikeza obathandayo isikhathi sakho omunye yangasese.
Ungakhohlwa ukuthenga izimbali futhi asayine ikhadi lokuzalwa. By the way, ungenza iposikhadi ngezandla zakho. Uzodinga ishidi landscape, iglu, iphepha ezinemibala, izimpawu, ubuhlalu elincane, kuze kudabuke umhlane, zonke mina wawukwazi ukubalekela amehlo akho engqondo. Ukwakha amakhadi, ungaxhuma futhi abasebasha. Abadala ngokucophelela ngaphezulu inhliziyo iphathelene izipho ezinjalo. Bathanda kabusha funda izifiso kanye siyakuhalalisela kusukela umzukulu wakhe ugogo ubambe ubufakazi samanje ukunakwa kwakho kanye nenhlonipho.
Ungathenga i-albhamu nezithombe umndeni icocekile. Ngena ngemvume, ukusakaza eminyakeni. Labo are isesimweni esingesihle, scan futhi uprinte. Ngosuku lokuzalwa ukuhlela samaholide albhamu.
Uma ungenalo ithuba ukuza, ukhetho best oda lokuzalwa imikhonzo ugogo wakhe umzukulu emsakazweni noma kuthelevishini. Konke kuncike ngayinye amathuba esikhwameni. Lapho ukhetha iculo ubheke okuthandwa kothandekayo. Lokhu kufanele kube enye yezingoma zakhe ozithandayo ngomculi zakho ozithandayo. ukukhetha ngokucophelela up umbhalo siyakuhalalisela.
Kusadingeka qiniseka ngaphambi kwesikhathi ukuze uthumele ikhadi ukubingelela. Ngezinye izikhathi lesi sikhashana elahlekile - ukusebenzisa amasevisi yocingo. Esikhathini sethu zobuchwepheshe, awukwazi ukuthatha lezi amathiphu sina futhi umane thumela i-SMS, kodwa siyakuhalalisela ngokuzalwa umzukulu wakhe ugogo kumele kube eziphathekayo ukuba azigcine ezandleni zakho, bonisa omakhelwane.
Ngokuvamile kukhona amathiphu ukuthi akufanele ukunikeza kobuchwepheshe obuyinkimbinkimbi nezinto ezibizayo, kungcono ayikalungi. Uma ugogo lidinga esiqandisini noma umakhalekhukhwini omusha, futhi une ithuba, jabulisa kothandekayo. Ngiseyingane ugogo njalo wazama ukufeza zonke umzukulu isifiso, manje isikhathi sakho ukugcwalisa izicelo zakhe.
Uma ucabanga phezu into ngayinye lokuzalwa imikhonzo umzukulu kukagogo, ukwakha iskripthi encane yalo mkhosi, umcimbi ngokwayo kuyokwenzeka kalula. Ukuze anakekele umuntu amthandayo, ukumjabulisa akuyona njengoba kunzima njengoba kubonakala efika kuqala.
Pearl powder izimonyo: Uhlolojikelele, izici isicelo kanye nempumelelo
Territory ngaphambi 1917: the yokubusa, endaweni kanye nsi koMbuso Russian
Ukuguqulwa noma Tuning of ATVs
"Mike & Molly": abalingisi, izindima, indaba